Mukadzi akaona kuti muti wacho wakanaka kudya zve unoyevedza kutarisa uyewo kuti unogona kungwarisa munhu. Ipapo akabva atora muchero wawo akadya, akapawo murume wake akadyawo.
uzvibate kana uri munhu anokara kudya.
nokuti chidhakwa neanokara kudya vachava varombo, vanotsomwaira nehope vachapfeka mamvemve.
Mwana anochengeta mutemo ano ungwaru, anoshamwaridzana nemharadzi dzevana anonyadzisa baba vake.
Asi vakaoma mwoyo, havana hanya asi ini ndinofarira mutemo wenyu.
Regai Kristu ave ndiye demautare renyu rokuzvidziirira naro muhondo, murege kuva nehanya nezvenyama kuti mugutse havi dzayo.
Mumwe wavo, muporofita wavo pachavo akati vaKiriti vatauri venhema nguva dzose, zvikara zvakaipa, nyope dzavanhu dzina makaro.
 Usaite ushamwari nezviradza zvewaini kana kuva navanokara nyama nokuti chidhakwa neanokara kudya vachava varombo, vanotsomwaira nehope vachapfeka mamvemve.
 Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene ari mamuri anobva kuna Mwari? Hamusirimi muridzi wezvamuri. Makatengwa nomutengo. Naizvozvo rumbidzai Mwari mumuviri wenyu.
 Zvifananidzo zvavo zvokunamata, isirivha nendarama, zvakaitwa namaoko avanhu. Zvine miromo asi hazvitauri; zvina maziso asi hazvioni. Zvine nzeve asi hazvinzwi; zvine mhuno asi hazvinhuwidzi zvina maoko asi hazvigoni kubata; zvina makumbo asi hazvifambi, hapana kana izwi razvinogona kuburitsa nehuro dzazvo. Saka vanozviumba vachafanana nazvo; vachafananawo nazvo vanovimba nazvo.
 Saizvozvo ngatiregei kupana mhosva asi ngatitozviitirai chisungo chokuti hatimboisa chinopingiridza kana chinodzivirira panzira yehama yedu. Ndinoziva uye ndinokurudzirwa muna Tenzi Jesu kuti hapana chinhu chakan'ora pachacho asi kuti chakan'orera kuno uyo anochiti chakan'ora. Kana hama yako ichiodzwa mwoyo nezvauri kudya hauchisiri kuita zvine rudo. Usaite kuti chaunodya chiparadze munhu akafirwa naKristu. Saka usaite kuti chakanaka kwauri chizonzi chakaipa nokuti umambo hwaMwari haurevi chokudya kana chokunwa asi hunoreva ururami norugare nokufara muna Mweya Mutsvene.
 Akaita kuti mhepo yokumabvazuva ivhuvhute kumatenga. Akatungamirira nesimba mhepo yokumaodzanyemba. Akanaisa pavari nyama sohuruva, shiri dzina mapapiro sejecha ramakungwa. Akadzidonhesa pakati pamatendhe avo munharaunda yose yapavaigara. Vakadya vakanyatsoguta nokuti akavapa zvavaipanga. Asi havi yavo isati yambopera, chokudya chichiri mukanwa mavo, Mwari akavavirukira nehasha akauraya vakanyatsosimba vacho akarizha majaya akasvika eIsiraeri.
2 Timoti ๓:๑-๙
 Nzwisisa izvi zvokuti kumazuva okupedzisira kuchauya nguva yenhamo nokuti vanhu vachava vanhu vanozvida vanokara mari, vanozvikudza, vanozvitutumadza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingatendi, vasina hanya naMwari vasingamboona kuti munhu chii, vasingagoni kuyanana navamwe, vana makuhwa, madzenga avanhu, namagandanga zvawo, vavengi vezvinhu zvakanaka navanhu vasingavimbiki, vanhu vasingabatiki pavo, vanozvitutumadza, vanoda mafaro kupinda Mwari vanechitendero chechipameso ivo vachiramba simba racho. Siyana navanhu vakadaro. Pakati pavo ndipo pana vamwe vanopinda mudzimba dzavanhu vachikachikira vakadzi vakaneta neta uye vakaremerwa nezvitadzo, vanopeperetswa nezvinhu zvose, zvose vanotevera munhu wose wose vasingagoni kusvika pakunzwisisa chokwadi. Sezvakaita Janesi naJamburesi vakapikisa Mosesi, saizvozvo vanhu ava vanopesanawo nechokwadi. Vane pfungwa dzakaora. Vanhu vakakundika muchitendero chavo. Asi hapana kwavanosvika nokuti munhu wose achaziva upenzi hwavo sezvakangoitika kuna varume vaviri ava.
 Zvino chiudza vanhu uchiti, ‘Zvichenurei nokuti mangwana muchapiwa nyama yokudya. Tenzi akazvinzwira kunyunyuta kwenyu, muchiti ndiani angatipewo zvedu nyama yokudya muchiti taiva nani zvedu kuIjipiti.’ Zvino Tenzi achakupai nyama kuti mudye. Hamuzoidya kwezuva rimwechete, kana maviri kana mashanu, kana gumi, kunyange makumi maviri. Asi muchadya mwedzi wose, kusvikira yava kubuda nomumhuno dzenyu, yava kukufinhai. Izvozvo zvichaitika nokuti makaramba Tenzi ari pakati penyu. Makamunyunyutira muchiti takabudirei zvedu Ijipiti.” Mosesi ndokuti kuna Tenzi, “Ini ndiri kutungamirira mazana matanhatu ezviuru zvavanhu. Ndovamungati imi mungavape nyama yavanokwana kudya mwedzi wose? Ko mombe nehwai dzakakwana dzinowanika kupi dzingabayiwe kuti vawane nyama yavanokwana? Ko hove dzose dzomugungwa kunyange vakadziunganidzirwa vangakwane here?” Tenzi ndokuti, “Ko kune chii chingatadze kuitwa nesimba rangu? Zvino muchaona kuti zvandataura zvinoitika here kana kuti kwete.” Mosesi akabuda akandoudza vanhu zvaakanga audzwa naTenzi. Akakokorodza vatungamiriri makumi manomwe avarume vechikuru vavaIsiraeri ndokuvamisa vakapoteredza tendhe iroro. Ipapo Tenzi akauya ari mugore akataura naMosesi. Akatora mweya pamweya waiva muna Mosesi akaupa vatungamiriri vaya vaiva makumi manomwe. Mweya iwoyo pawakapinda mavari, vakatangisa kuporofita asi havana kuzoramba vachiporofita. Zvino vamwe varume vaviri vakasara vari kumatendhe, mumwe ainzi Eridhadhi, mumwe achinzi Medhadhi. Mweya waTenzi wakauya pavari. Varume ivava vakanga vachiverengerwa pavakuru vakuru vaya, asi vakanga vasina kuenda kutendhe ikoko. Vakatanga kuporofita vari kumatendhe ikoko. Rimwe jaya rakamhanya kundoudza Mosesi kuti Eridhadhi naMedhadhi vari kuporofita mumatendhe. Joshuwa mwanakomana waNuni mubatsiri waMosesi akati kuna Mosesi, “Changamire dzivisai vanhu avo!” Mosesi akati, “Ko wava kuvaitira shanje nemhaka yangu here? Ini ndinodisa kuti dai vanhu vose vaTenzi vave vaporofita vose zvavo. Dai Tenzi angoisa Mweya wake pavari.” Mosesi navatungamiriri vavaIsiraeri vakazodzokera kumatendhe avo. Tenzi akatumira mhepo yakaunza zvihuta kubva kugungwa. Yakazvisvitsa pamatendhe nenharaunda yepo yose zvokuti uchibva pamatendhe uchienda kumativi ose zvawo kuti undosvika kwazvaiperera zvaitoda rwendo rwomuswere wose wezuva. Zvakanga zvakatsikirirana zvokuita murwi unokwana mita rimwechete kubva pasi. Vanhu vakaswerera vakararira vakaswerera zvakare zuva rechipiri vachituta zvihuta. Hakuna munhu akatuta zvihuta asina kusvitsa chiuru chimwechete chamakirogiramu. Vakasasika zvihuta muruvanze rwamatendhe ose. Asi nyama vachinayo mukanwa isati yapera Tenzi akavavirukira nehasha akavarova nedenda rakaipa. Naizvozvo nzvimbo iyoyo yakatumidzwa zita rokuti Makuvaovukukara nokuti pakavigwa vanhu vaikara nyama.